TTSweet: တစ်ခါတစ်လေ တို့လဲ Tai Tai
Posted by T T Sweet at 2:25 PM
AMK October 31, 2011 at 2:39 PM
တီဆွိ အများကြီးဝယ်ပါလား ဦးထုတ်လေးလှတယ် ဂျူဂျူလေးအတွက်ဘာမှပါဘူးလား?
T T Sweet October 31, 2011 at 2:42 PM
ဂျူဂျူ့အတွက် ဦးထုပ်ပဲ ၀ယ်ခဲ့တယ်။ ခုပုံတင်လိုက်ပြီ။ အ၀တ်အစားက သူပါမှ ၀ယ်လို့ရတာလေ။
sis, we are in the same boat..exactly the same
i like ur post very much..the hat u chose is fit with u..
ဖိုးတုတ် October 31, 2011 at 3:10 PM
ဟားဟား ၊ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း နားဦးမှ၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း ကိုယ်ဝယ်ဦးမှာလေ၊ စလုံးကနာမည်ကြီး မင်းသမီး Zoe Tay နဲ.တူတယ်၊
nilar October 31, 2011 at 3:11 PM
အမရယ်..အ၇ုပ်မလေးတွေဝတ်ထားတာလေးတွေပါ ၀ယ်ခဲ့ရောပေါ့..လှမှလှ တို့အမက..ဟုတ်တယ်အမရေ..တယောက်တည်းဈေးဝယ်ရတာကို သဘောကျတယ်..စိတ်လွတ်လပ်တယ်..ဘယ်သူမှအားနာစရာမလိုဘူးဟုတ်..
You look pretty with the new things you bought.
တီဆွိ အရမ်းအရမ်းကို မိုက်ပါသည်။ :)
susu October 31, 2011 at 5:25 PM
မဒမ်ကိုး October 31, 2011 at 6:33 PM
ထိုက်ထိုက်ရဲ့ အကျီနဲ့ ဦးထုပ်ကြီးကိုသွားရေ ကျသွားပါကြောင်း ဆွိထိုက်ထိုက်ရယ်း)
မြသွေးနီ October 31, 2011 at 6:53 PM
ညက်ခုံးရှုံ့ကြီးတော့ သဘောကျနေမှာ မြင်ယောင်သေး...။
pretty in last photo (above umbrella photo).
rose October 31, 2011 at 7:42 PM
Tsweet, you look very pretty :))
ကိုဇော် October 31, 2011 at 9:11 PM
ထီးဂေါက်လေးပါ ကိုင်လိုက် ပြီးရော အစ်မရော။
ဒါမှ မော်ဒယ် ပီသတော့ မပေါ့။
Mo October 31, 2011 at 9:28 PM
အိမ်မက်စေရာ October 31, 2011 at 10:28 PM
မိုက်တယ်တီဆွိ ..ဆက်လုပ် အဟိ
Anonymous November 1, 2011 at 12:28 AM
အမရဲ. ထိုက်ထိုက်ဘဝကို အားကျသွားပါကြောင်း
စင်ကျားပူမှ streessful ၁ဦး
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 1, 2011 at 1:19 AM
အင်္ကျီလေးက အပေါ်က ပုံမှာ သေးသေးလေးဖြစ်နေတော့ မဆွိသမီးလေးအတွက်နေမှာလို့ စဉ်းစားလိုက်မိတယ်
အောက်မှာ လူပုံနဲ့တကွ မြင်လိုက်တော့မှ
ဟယ်... လူကြီးအတွက်ပါတကားလို့ ရေရွတ်လိုက်မိတော့တယ်.... ဟိဟိ
ဓာတ်ပုံထဲက လူလည်းလှတယ် အနောက်က ရှုခင်းတွေလည်း လှတယ်
NNYM November 1, 2011 at 4:01 AM
တီဆွိ ဒီဇိုင်း အရမ်းလန်းတယ်.............. တယောက်တည်း ရှော့ပင်းထွက်တာ အားကျတယ် :)
မသက် November 1, 2011 at 7:16 AM
အစ်မ .. အရမ်းလှတယ်။
Thida November 1, 2011 at 12:08 PM
Sonata Cantata November 1, 2011 at 12:28 PM
ကြိုက်တယ် ...ကြိုက်တယ်... အကုန်ကို ကြိုက်တာပါပဲအေ... တီဆွိက ၀ယ်တတ်တယ်တော့
အားကျတယ် အမရယ်။ ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။
အော်..ဈေးဝယ်တာကို ဆားချက်သွားတယ်နော်.. :)
Touch Me Not November 2, 2011 at 1:33 AM
mstint November 2, 2011 at 10:47 AM
Shopping ထွက်ရတာ တီတင့်တော့ ဝါသနာမပါဘူး ခြေညောင်းလို့း))
သူများတွေသွားတာကိုတော့ အားကျတယ် စွိတီရေ။
အိမ်ထောင်ကျစမှာ စွိတီအခက်အခဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ တီတင့်ရဲ့ ညီမလေးနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပဲမို့ သဘောပေါက်တယ် တီတင့်ညီမလေးက ကြက်ဥပဲပြုတ်တတ်တား))
စွိတီနဲ့ ဝတ်စုံလေး လိုက်ဖက်တယ်။
khin November 2, 2011 at 2:00 PM
ရှောရှက် အေ။။။။အယ်...ချောချက် အေ.မမဆွီ တို့နှယ်။
ဟယ်..အပေါ်မှာ အကျီပုံတွေပဲ တင်ထားကြည့်ပြီး အဲ့ဒီအပြာလေးကို တီဆွိနှယ် တုံးလိုက်တာဟယ်လို့တွေးနေတာ..
အောက်ဆုံး လူကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ့တော့မှ........
သြော် ဒါကြောင့်လဲ တီဆွိနံမယ်ကြီးတာကိုးလို့.........
San San Htun November 24, 2011 at 1:42 PM
tsu February 26, 2012 at 9:50 PM
hi ama.. this isafirst timei came and read ur blog.. i like the way u write. it is funny and also lovely.. thanks for sharing ur knowledges, experiences and so on
Unknown February 29, 2012 at 10:19 PM
Pretty ma sweet...
T T Sweet March 6, 2012 at 11:51 PM
I also thanks Ma Tsu for your encouragement. Yes, I just shared my feeling, experience and some 10 cents knowledge. Thanks again.
Unknown March 7, 2012 at 5:49 PM
ama.. i am 27yrs old.. Please call me Tsu tsu (pronunce su su but spell like mitsubishi :P hehe ) working at Abu Dhabi asacivil eng with tiny exp. (just to introduce myself) u might be want to know who is your fans.. :)